UMngqithi unconywa ngokungazithwali
LAPHA abaqeqeshi beMamelodi Sundowns, uRulani Mokwena noManqoba Mngqithi baphahle umdali wabo uPeter Shalulile ngemuva kokuklonyelisa imiqhele yokuvelela kwiDStv Premiership ngo-Agasti noSepthemba
Sibusiso Mdlalose | October 13, 2021
ISISHO sesiZulu sithi umuntu imisebenzi yakhe iyamlandela.
Yilokhu okwatholwa yithimba leSolezwe ngeSonto, yizimenywa namalungu omphakathi abebeyingxenye yomcimbi womqeqeshi weMamelodi Sundowns, uManqoba “TV” Mngqithi, wokugubha iminyaka engu-50 azalwa, obusesigodini saseLusizini, eMvubukazi, eMzimkhulu kusavalwe isizini ngoJulayi.
UMQEQESHI weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi, nomkakhe, uBongi Mngqithi (uMaThusi) emcimbini wokubungaza lo mqeqeshi ngokuhlanganisa iminyaka ewu-50 edla anhlamvana Isithombe: Sibusiso Mdlalose
UBHEKISISA Mngqithi, ongumfowabo omdala kaManqoba, uthi umnewabo unenhlanhla yokuthi abe ngumqeqeshi welinye lamaqembu amakhulu kwiPremier Soccer League Isithombe: Sibusiso Mdlalose
Ngaphandle kwezicukuthwane ezingosaziwayo ebholeni ebezihambele lo mcimbi, okuhlale obala ukuba ngumuntu wabantu kukaMngqithi osanda kuzibula ngendebe yeDStv Premiership.
Kubukeka nangesizini ephezulu ka-2021/2021 uMngqithi, oqeqesha ngokubambisana noRulani Mokwena kwiSundowns, bezimisele ukuqhubeka lapho begcine khona ngedlule.
NgoLwesithathu uMngqithi noMokwena kanjalo nomgadli waseNamibia, uPeter Shalulile, baklonyeliswe ngomklomelo womqeqeshi ovelele kwiPSL ngo-Agasti noSepthemba nowomdlali ovelele.
Lokho kungenxa yokuthi ngemuva kwemidllao eyisithupha kuqale isizini ka-2021/2022 babalwa namaqembu amathathu angakehlulwa kule sizini.
Kubuyelwa emidlalweni yeligi ngempelasonto beqhwakele esicongweni selog kanti uShalulile usebasele amagoli amahlanu (amane kwiligi nelilodwa kwiMTN8).
NgeSonto iSundowns iqala inyathuko yeChampions okwesibili ngaphansi kukaMngqithi. Izobhekana neManiema Union yaseDR Congo emdlalweni osekuhambeni ngo-4 ntambama.
Ukuba ngumuntu wabantu kukaMngqithi kwafakazelwa ngoJulayi nayiningi lamalungu omphakathi, amanye awo Isolezwe ngeSonto elakwazi ukuxoxa nawo.
La malunga awawuvali umlomo ngokuzithoba nokungazikhukhumezi kwalo mqeqeshi onconywa nangokungazenyezi nguka endaweni yasemakhaya.
KUNGESIKHATHI umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi, ophethe isiheshe somumese, esekhipha izithebe zenyama ngononina kwindumezulu yomcimbi wokumbungaza ngosuku lwakhe lokuhlanganisa iminyaka ewu-50 edla anhlamvana Isithombe: SIBUSISO MDLALOSE
Isolezwe ngeSonto laphinde lathola ukuthi ukuzithoba kwalo mqeqeshi kuholele ekutheni uZolile Gwagwa, ongomunye wabanumzane endaweni, amhlabise ngenkomo, kwathi abafowabo, uBabalo noMava, bakhipha isiklabhu.
UMveli Hloba, ongunobhala weManqoba Mngqithi Foundation (MMF), esungulwe ngo-2009 futhi ongomunye wontanga bakaMngqithi akhule nabo, usidwebe sacaca isithombe ngokuphokophela kwalo mqeqeshi aze afike kuleli zinga asekulo namuhla, ekhulela kule ndawo ebalwa nezinye eziningi zasemakhaya ezintula intuthuko nengqalasizinda.
KUNGESIKHATHI uManqoba Mgqithi emukela esinye sezipho ebeziqhamuka ekhweni lakhe, kwaThusi, enikezwa ngomunye wabalamu bakhe Isithombe: Sibusiso Mdlalose
“UManqoba sikhule naye evele elidlala kakhulu ibhola. Ngenxa yokontuleka kwezinkundla zokudlalela kule ndawo yakithi yaseLusizini, oManqoba babeze bashintshe insimu noma ingadi engasebenzi bayenze inkundla yokudlala ibhola,” kusho uHloba.
Ngokusho kukaHloba, le nhlangano (MMF) engenzi nzuzo, bayisungula bengamalungu omphakathi ngenhloso yokufukula intsha yaseMzimkhulu.
Ukusebenza ngokuzikhandla kukaManqoba kuze kwakapakela nakumkakhe naye osukume wabhukula wasungula inkampani ehlela imicimbi, iPrincyN4M Celebrations.
“Impumelelo kaManqoba yiyo eyasigqugquzela ekusunguleni le nhlangano, sisebenzisa igama lakhe ngoba liyi-brand, okuyinto ayivuma naye ukuthi siyenze yize aqala waba manqika ngoba engeyena umuntu othanda ukugqama.
“Senza okuningi kule nhlangano ukuthuthukisa intsha yakule ndawo kwezemidlalo ngokuhlela imiqhudelwano yebhola.
“Asigcini ngebhola kuphela njengoba sesike sahlela nomqhudelwano wesibhakela.
“Inhloso enkulu wukufukula intsha yakule ndawo, siqhakambisa impumelelo kaManqoba njengendlela yokukhuthaza intsha ukuze ibone ukuthi ingakwazi ukuphumelela empilweni ngisho noma ngabe ibuya endaweni enjani noma ibhekene nezinselelo ezinjani empilweni,” kuphawula uHloba.
UBhekisisa Mngqithi, ongumnewabo omdala kaManqoba, ukubeke ngokusobala ukuthi nakuba yena engumlandeli wokuqina weKaizer Chiefs, umndeni wonke wakwaMngqithi uyameseka kakhulu uManqoba emsebenzini wakhe wokuqeqesha.
“Umfowethu wayevele elidlala kakhulu ibhola ekukhuleni kwakhe kodwa ngangingacabangi ukuthi ngelinye ilanga angagcina engumqeqeshi ovelele.
“Ngamangala nje sengizwa kuthiwa useyaqeqesha eMgungundlovu (kwiMaritzburg City FC neMoja United FC), kwaye kwaya wagcina eseqeqesha kwiPSL.
“Ngendlela engiziqhenya ngayo ngoManqoba, ngelinye ilanga ngake ngathi kuye ‘uyazi mfowethu ukuthi unenhlanhla kanjani? Phakathi kwabantu abako-55 million eNingizimu Afrika, namaqembu ebhola angu-16 kwiPSL, wena phakathi kwabo ungumqeqeshi weqembu elikhulu phakathi kwala maqembu angu-16. Lokho kusho ukuthi ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu.’
“Lokhu kwamthokozisa kakhulu futhi kwamkhuthaza. Ngiyameseka umfowethu yize ngiyiMpofana yokuqina mina, naye uyakwazi lokho ngoba naye ukhule vele eyiyo njengoba lapha ekhaya siyiMpofana,” kusho uBhekisisa, ongummeli kwiLegal Aid Board.
Kuyacaca uManqoba, nomnewabo, uBhekisisa, babuya emndenini oyazisayo imfundo kwazise naye uManqoba wagogoda ebuthisheleni waze wafundisa nasezikoleni okubalwa kuzo iJabula Combined School neNjoloba High, eHowick, akumangazi ukuthi unina walezi zinsizwa ongasekho, uMaHadebe, ezimchaza njengowayewa evuka nazo, wayenguthisha.
“Umama wayenguthisha ngakho wayekugcizelela kakhulu ukubaluleka kwemfundo kithi, ewa evuka nathi kunzima eyedwa, ubaba engasekho njengoba wasishiya sisebancane,” kuqhuba uBhekisasa.
Naphezu kokuba emcimbini owawusekhaya uManqoba wayegqoke econsa, edle isudi emnyama kanokusho, kodwa ngemuva komcimbi wabeka phansi amasudi wagqoka “ezasekhaya”.
Wabe esezibambela mathupha emisebenzini yasekhaya, elawula nezithebe kunjeya, ekhombisa ngokusobala ukuthi akayona indoda ethumelayo.
Empeleni ukuzehlisa nokwazisa wonke umuntu, kungakhathaleki ukuthi ukuliphi izinga, kubonakale kakhulu nangendlela amabhungu akule ndawo, namalungu nje omphakathi jikelele abemthakasela ngayo.
Naye futhi wakhombisa ukuwathakasela, engakhombisi nokuncane ukuzikhukhumeza okungalindeleka kumuntu osezingeni lakhe ngokwempilo nangokwempumelelo aseyizuzile empilweni.
UMngqithi udlule ezandleni zabaqeqeshi abahlonishwayo ekucijeni abadlali abasakhula KwaZulu-Natal, okubalwa kubo uReggie “Yize Bekhala” Shelembe noThabo Dladla.
Ngemuva kokuqeqesha emaqenjini asezigabeni eziphansi okubalwa kuwo iMaritzburg City neMoja United, ngo-2007 ugcine ethola ingqayizivele yethuba lokuqeqesha esigabeni sePremiership eqashwa kwesokuqeqesha iLamontville Golden Arrows.
Nguye futhi onqobele i-Arrows isicoco sayo sokuqala emlandweni wayo, ngeMTN 8 ngo-2009 esizana noMandla Ncikazi, osecija i-Orlando Pirates.